Naqshadeynta Aragtida ee abuureysa gudaha ujeedoyinka Bal Harbor ee Hill Tide Estates-Jikada qasabadaha, Tuubbada Qaanadaha Buuxda, Qasabadaha Musqusha | WOW
Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Naqshadeynta Aragtida ee abuureysa gudaha qaabka Bal Harbor ee Hill Tide Estates
2020 / 09 / 14 QoondayntaTilmaamaha qasabada 713 0
Naqshadaynta Fikradda ee ka dhex abuurta mannequin Bal Harbor ee Hill Tide Estates
BOCA GRANDE - Madaxweyne Ku Xigeenka Naqshadaynta Naqshadeynta Ruta Menaghlazi wuxuu sameynayaa naqshad gudaha ah oo loogu talagalay Seagate Hagaajinta Kooxda 'Bal Harbor mannequin' oo hadda ka hooseysa horumarka Hill Tide Estates, dhul baaxaddiisu dhan tahay 9.98 hektar oo ku taal cirifka koonfureed ee Boca Grande oo ay horumarinayso Seagate . Waxaa lagu qiimeeyaa $ 6,900,000 oo wata alaab, Bal Harbor waa mid ka mid ah dhammaan seddexda moodo ee laga iibsan karo Hill Tide Estates. Seagate waxqabadka Captiva mannequin wuxuu u furan yahay daawashada iyo sidoo kale ikhtiyaarrada naqshad gudaha ah oo uu sameeyay Ruta Menaghlazi. Naqshadaynta Fikradaha waxaa loo magacaabay qofka qaata Abaalmarinta Aurora ee 2019 ee loogu talagalay Captiva gudaha gudaha Naqshadaynta ugu Fiican ee Naqshadeynta Qiimaha in ka badan $ 2 milyan. Seagate waxaa loo soo bandhigay Abaalmarinta 'Aurora Award' ee loo yaqaan 'Captiva' oo ka tirsan Guryaha ugu Fiican ee Qoysaska aan Deganeyn ee Degan 4,000 Sq. Fasalka Ft. Iyada oo ay weheliso Bal Harbor iyo Captiva, mankaquinada 'BCB Properties' Beacon mannequin ayaa soo socota.
Shaqaalaha guud ee iibka Hill Tide Estates waxay ku yaalliin mantiquinka 'Captiva'. Bandhigga ballamaha inta u dhexeysa 10:00 subaxnimo ilaa shanta: 00 pm Isniinta ilaa Sabtida iyo duhurkii ilaa shan: 00 pm Axadda waxaa la sameyn karaa iyadoo lala xiriirayo Seagate's Heath Seckel taleefanka 863.207.2586 ama iimayl ahaan
Waxaa naqshadeeyay RG Designs, qorshaha sagxadda Bal Harbor ee saddexda-ah wuxuu kakooban yahay 5,198 sq. Ft cirka hoostiisa oo ah 2 meelood oo hoy ah. Gelitaanka marxaladda sagxadda qorshaha iyo irridda laga soo galo waxaa dhinac taagan laba garaash oo ka weyn. Iyada oo ay weheliyaan meelaha wax lagu kaydiyo, marxaladda hoose waxay ka kooban tahay aagag badan oo wax lagu keydiyo oo u wanaagsan keydinta xeebta, kalluumeysiga, iyo qalabka doomaha. Aaladda marxaladda dabaqa waxay siinaysaa gelitaanka wiishka iyo jaranjarada taas oo keenta kala-duwanaanta guriga. Marxaladda koowaad ee hoyga ayaa soo bandhigi doonta qol waasac ah oo waasac ah, jiko jasiirad ah, meel bannaan oo wax lagu cuno, cilmi baaris, iyo qol jiif labaad oo heer sare ah. Booska guriga oo dhameystiran, oo ay weheliso cilmi baarista iyo qolka jiifka labaad, wuxuu u furan yahay sagxad leh barkad iyo spa, iyo meel ka baxsan bannaanka oo leh wada hadal iyo aagag wax lagu cuno, jikada albaabbada ka baxsan, iyo tubbada barkadda. Marxaladda labaad ee hoygu waxay ka kooban tahay qol gunno ah oo leh bar qoyan, qolka jiifka weyn, iyo laba qolal booqdeyaal ah oo VIP ah. Qolka gunnada, qolka jiifka, iyo mid ka mid ah qolalka booqdayaasha VIP ee u furan dusha sare ee laga yaabo inay bixiyaan meel wanaagsan oo lagu raaxeysto qorrax dhaca gacanka. Shaashadda ayaa dul marta barkadda iyo bannaanka hoyga.
Naqshadeynta gudaha ee Ruta ee mannequin-ka Bal Harbor waxay soo gudbin doontaa isku-darka dajinta ee noocyada xeebta, rustic, iyo noocyada moodada ah. Mawduuca "Xeebta xeebta" waxaa lagu aasaasi karaa daaqadaha guriga ee cadcad iyo goynta, dhigida saqafka birta tollan ee taagan, iyo dhinacyada Hardy-Board. Gudaha, gogosha cad iyo midabada cawlan ee cawlan waxaa lagu barbardhigi karaa cawl, buluug buluug ah, iyo lahjad aan khibrad lahayn. Midabada midabku waxay ku ciyaari doontaa ka soo horjeedka xoqida sagxadda alwaax adag. Jaranjarada ayaa shaqeyn doonta biraha jiifka ah, kacsiga cad, iyo tumanada u dhigma qorraxda geed alwaax adag. Midabaynta maraakiibta dhabta ah ama wasakhda leh iyo waxyaabaha ku saabsan saqafka ayaa lagu soo bandhigi karaa xulashada guryaha. Golaha wasakhda ee jikada iyo qubaysku waxay noqon karaan alwaax cad oo leh jawi dabacsan oo dabacsan isla markaana lagu soo bandhigi karo iyadoo la adeegsanayo sagxadaha miisaska dusha sare leh. Marxaladda hore ee hoyga bannaanka hoyga ayaa soo bandhigi doonta dib u gurasho xasilloon, oo ay ku dhan yihiin barkad gees ah oo aan xad lahayn oo leh spa iyo kabadhada qorraxda.
Marxaladda labaad ee hoyga ayaa sii wadi doonta naqshadeynta naqshadeynta samaynta jawi dabacsan waxayna ku shaqeyn kartaa barkad qoyan oo ku dhex taal qolka ballaaran ee gunnada marka lagu daro baarka subaxa. Qolka jiifka ugu weyn wuxuu soo koobi doonaa labo qol oo waaweyn oo lagu lugeeyo iyo qubeys leh waxyaabo aan jirin oo gooni ah, tuubbo taagan, iyo qubays socod ah.
Waxqabadka Seagate ee Captiva mannequin waxaa lagu qiimeeyaa $ 5,995,000 oo qalabaysan wuxuuna ka kooban yahay 4,865 sq. Ft cirka hoostiisa oo leh 11,184 sq. Ft. Xulashada marxaladda hoose laba garaash iyo hoolal dhimis. Marxaladda koowaad ee hoyga waxaa ku yaal qol fiican, jikada jasiiradda, iyo meel wax lagu cuno oo u furan lanai, cilmi baaris, iyo qolka jiifka weyn. Fursadaha tubbada qabatimadu waxay kala soocaan waxyaalo aan waxba tarayn, tuubbo taagan, iyo qubays socod ah. Marxaladda labaad waxay soo bandhigeysaa seddex soo-booqde iyo qol gunno ah oo leh bar qoyan. Barxad iyo spa, oo ay weheliyaan barkad iyo fiidmeer, bannaanka hoyga dibedda waxaa ku yaal barkadda barkadda, jikada ka baxsan, iyo bannaanka cunidda meel ka baxsan. Gudaha Captiva wuxuu gudbiyaa dareen xeebeed. Qeybaha beige, lahjadaha buluugga ah iyo buluugga ah, iyo sagxadda geedku miisaanka culus ayaa soo bandhigaya xiriir la leh xeebta xaafadda agteeda.
Hoos u dhicida Captiva waxay soo bandhigeysaa saqaf furan oo dul wareegaya meesha ugu sareysa heerka labaad ee guriga. Jaranjarada ayaa ka dhalata qolka wanaagsan meelaha wax lagu dhejiyo ee u furan sagxadda barkadda iyo bannaanka hoyga. Fursadaha saqafka wanaagsan ee xulashada ayaa ku soo baxa sheyga oo leh carrab iyo jeexdin jeexdin. Darbiga shaqadu wuxuu soo bandhigayaa qalabka warbaahinta iyo TV ay weheliyaan waxyaabo farshaxanno lagu beddelan karo. Alaabtu waxay ka kooban yihiin sariir qayb ahaan, konsol ku yaal codad cad oo dhexdhexaad ah iyo alwaax, miiska is biirsaday, miis dhammaystiran, iyo kuraas waji leh oo leh waxyaabo jilicsan.
Dhamaadka cirifka jasiiradda jikada waxay ku kacdaa diidmo ka soo horjeedka quartzite. Barstools oo leh walxaha tweed iyo nalalka suunka ayaa soo bandhigaya goob kulan. Kabadhka wareegga waxaa lagu dhammaystiray caddaan iyo xulashooyin armaajo sare leh albaabbada muraayadda iyo daaqadaha guriga mar kale. Shidaalka Wolf wuu ku kala duwan yahay daboolka qoryaha cawlan. Qalabka guriga ee kaladuwan wuxuu ka kooban yahay qaboojiye / qaboojiye SubZero-bir ah, qaboojiyaha microwave ee Wolf, iyo laba weel dhaqe Asko ah. Bakhaarka lagu lugeeyo ayaa ka kooban sumad sameeyaha 'SubZero icemaker', Qaboojiyaha Whirlpool, iyo qasaalad iyo qalajiye.
Miis wax lagu cuno oo kuraasta rattanku fadhiyaan sideed meelood oo laga cuni karo. Albaab ayaa laga furaa guriga dibedda iyo dabaqa barkadda. Jikada dibedda waxaa ku jira solay shidaal, qaboojiye hoostiisa ku jira, keydka dabiiciga ee dabiiciga ah, iyo miisaska dhagxaanta dhagxaanta. Foornada shidaalka oo leh sagxad ilaa darbiga dhagaxa saqafka waxay ku dhegan tahay solayda. Sariir qeyb ka mid ah waxay siisaa fadhiga dabka. Miiska wax lagu cuno waxaa ku jira dhamaadka cirro leh oo u dhigma kuraasta wax lagu cuno ee leh barkimooyinka kareemka. Hoolka barkadda ayaa lagu dhammaystiray foornada tanlayda.
Baadhitaanka gudahiisa, labada irridood waxay u furan yihiin sagxad dahaadhan. Guryuhu wuxuu kala doortaa carrab xagal leh iyo saqaf jeexdin oo leh dhammaad cad. Alaabtu waxay ka kooban yihiin miis hickory cad, miis lagu hagaajiyo, miis fadhiya iyo miis waji ah, kuraasta wajiga, iyo shaqada farshaxanka.
Qolka jiifka weyn waxaa lagu dhameystiray beige iyo cadaan. Joodariga wuxuu ka kooban yahay gogol gogol leh oo gogol leh oo leh hareeraha hareeraha hareeraha leh. Bar subax oo leh kabadh salka yar oo cawl ah, miiska quartzite, iyo qaboojiye SubZero ah oo hoosta ku jira ayaa ku dhexyaal wadiiqo taasoo keeneysa tuubada gacanta ee xulashooyinka sagxadda dhagxaanta iyo golayaasha cawl ee leh miisaska quartzite.
Laba ka mid ah qolalka booqdayaasha marxaladda labaad ee u furan qorrax-baxa. Qolka gunnada waxaa loo furaa sagxad dahaarka leh waxaana ku jira bar qoyan. Qalabka alaabtu wuxuu ku maneystaa derbiga wejiga kale ee qolka. Qalabka kala duwan wuxuu ka kooban yahay sariir beige ah, miisaska wejiga, miiska is biirsaday, iyo kuraasta wejiga.
Naqshadaynta Fikradda waxay u abuureysaa gudaha Seagate moodhadhkeeda qalabaysan iyo guryo dhammaystiran oo loogu talagalay dadka deggan Miromar Lakes Seaside & Golf Membership, Quail West, Talis Park, Hill Tide Estates, iyo Esplanade Lake Member. Naqshadaynta Fikradda ayaa sidoo kale abuuri karta gudaha gudaha loo habeeyay ee loogu talagalay wax ka beddelka dadaallada, oo ay weheliso beddelaad dhammaystiran oo ah 5,487 sq-foot ah oo ah hoyga hantida ee Quail West, is-kaashatada xeebta ee Naples, iyo guri-dhaadheer oo ku yaal Bonita Bay. Fikradaha 'Idea Design' ee hindisaha naqshadeynta gudaha waxay ka kooban tahay labo-dabaq, 13,000 oo laba jibbaaran oo laba-jibbaaran oo dhisme ah oo u adeegta xarunta guud ee shirkadda ee Fikradda Naqshadaynta iyo Kooxda Horumarinta Seagate. Xarunta waxaa lagu dhejiyaa 9921 Interstate Commerce Drive ee Fort Myers.
Hore:: Isku beddelka qashin-qubka musqusha iyo pop-up Next: Tilmaamaha Kushiinka Jikada iyo Qalabka Iibsiga
2021 / 05 / 13 1213
2021 / 05 / 09 872
2021 / 05 / 08 751
2021 / 02 / 04 810
2021 / 02 / 03 834